WebM: Mitantana ny endrika horonantsary misokatra amin'ny GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
WebM, toy WebP, dia endrika iray amin'ny loharanom-baovao misokatra namboarin'i Google, fa amin'ity tranga ity ho an'ny rakitra multimedia, izany hoe, horonantsary indrindra. Navoaka nandritra ny taona maro koa izy io, saingy aorian'ny fandefasana ny endrika WebP.
Amin'ny ankapobeny mamorona WebM mifantoka amin'ny manatsara ny fitantanana ireo rakitra an-tsary miaraka amin'ny tanjona kendrena indrindra ny famelana ny fanaovana kopia horonantsary amin'ny Internet amin'ny fitaovana rehetra amin'ny fomba mety kokoa.
Ity endrika vaovao ity WebM Hatramin'ny nanombohany dia natao ho an'ny fampiasana mahomby kokoa sy ampiarahina aminy HTML5. Ho fanampin'izay, hampiasa ny Codecs VP8 sy VP9 to achieve a famatrarana be loatra. Amin'izany fomba izany dia azo tanterahana ny fitrandrahana na dia kely aza ny herin'ny computing.
Ary koa, toy ny efa fantatry ny besinimaro, YouTube, amin'ny maha sampana an'ny Google, manova ny horonan-tsarinao rehetra izao amin'ny WebM, na inona na inona ny endrika fisie tany am-boalohany, ka rehefa alaina ny horonan-tsary dia ity no endriny tsy misy kilema.
Hahafantatra bebe kokoa momba WebP ao amin'ny FromLinux Azonao atao ny mamaky ireo lahatsoratra mifandraika amin'izany:
FFmpeg dia efa misy fanohanana ny WebM
Ofisialy io: nanambara ny fanohanany ny endrika horonan-tsary WebM ny FSF
Avadiho amin'ny ogg / ogv, webm na mkv amin'ny Linux miaraka amin'i OggConvert
Ary hamaky bebe kokoa momba ny endrika WebP, afaka mamaky ny lahatsoratray teo aloha antsoina hoe:
1 WebM: endrika horonantsary loharano misokatra
1.1 Thumbarils horonan-tsary WebM ao Thunar
1.2 Play sy edit ny horonan-tsary WebM
1.3 Fitaovana an-tserasera hamoronana horonan-tsary (hanova) ho WebM
WebM: endrika horonantsary loharano misokatra
Ny format WebM manana tranokala ofisialy izay ilazana azy hoe:
"WebM dia format tsy misy fisalasalana, loharanom-baovao misokatra natao ho an'ny tranonkala".
"WebM dia mamaritra ny firafitry ny fitoeran-drakitra, ny horonan-tsary ary ny endrika audio. Ny rakitra WebM dia misy riandranon-tsarimihetsika voahazona miaraka amina codec vidéo VP8 na VP9 ary renirano audio voahazona miaraka amina codec audio Ogg na Opus. Ny firafitry ny rakitra WebM dia mifototra amin'ny kaontenera Matroska".
Thumbarils horonan-tsary WebM ao Thunar
Ampidiro na manamarina izany ao amin'ilay fisie voalaza «ffmpegthumbnailer.thumbnailer» miaraka amin'ireto baiko baiko manaraka ireto:
Misy ny fanovozan-kevitra manaraka «video/webm» ao amin'ny tsipika fikirakirana izay manomboka «MimeType» Fa maninona no mijanona toy izao ny atiny:
Atsaharo ny session ho an'ny mpampiasa ary andramo amin'ny fisokafana Thunar hijerena ny sary kely momba ny sary WebM.
naoty: Manamarina ny fametrahana ireo fonosana «ffmpeg, ffmpegthumbnailer y libvpx5». Ity fonosana farany ity dia mety, miankina amin'ny Distribution and Repositories, amin'ny endriny hafa, izany hoe «libvpx6 y libvpx7».
Play sy edit ny horonan-tsary WebM
Ho an'ny asa toy izany dia manoro hevitra aho ny hampiasa ny rehetra mpilalao horonantsary VLC ary ny mpamoaka horonantsary Pitivi. Tsy toy ny WebP, WebM dia manerana izao rehetra izao ao amin'ny Fampiharana GNU / Linux, izany hoe, manana fanohanana lehibe kokoa amin'ny ankamaroan'ny Mpilalao horonantsary sy mpamoaka horonantsary.
Fitaovana an-tserasera hamoronana horonan-tsary (hanova) ho WebM
Raha misy, tsy manana eo am-pelatanana GNU / Linux fampiharana tsara ho an'ny asa toy izany, na izany aza VLC miasa tanteraka ho azy, ary koa Mystiq, misy foana ny fitaovana tsara maro an-tserasera hanovana zavatra maro, toy ny endrika fisie. horonan-tsary. Fa natao manokana ho an'ny horonan-tsary WebM mamporisika anao izahay manandrana: UniConverter an-tserasera.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny endrika horonantsary open source antsoina hoe «WebM» noforonin'i Google taona maro lasa izay, sy ny fomba fitantanana ireo horonan-tsary miaraka amina endrika io GNU / Linux; be be fahalianana sy fampiasana, Ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » WebM: Tantano ny endrika horonantsary misokatra amin'ny GNU / Linux
Ny kinova PeerTube 2.3 vaovao dia efa navotsotra ary koa manatevin-daharana ny teny tafiditra